Madaxweynaha Soomaaliya oo Khudbad ka jeediyay Ohio State University (Sawirro) | Salaan Media
Madaxweynaha Soomaaliya oo Khudbad ka jeediyay Ohio State University (Sawirro)
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la kulmay madaxda Jaamacada Ohio State University, iyo qaar ka mid ah Xildhibaanada gobolka Ohio ee dalka Mareykanka, iyadoo lagu wado in Madaxweynaha ka qeyb galo shirka loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey ee ka dhacaya New York.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa khudbad ka jeediyey Glenn School of Public Affairs oo qeyb ka ah Jaamacadda Ohio, halkaas oo ay goobjoog ka ahaayeen dad dhaafaya 250qof.
Jaamacadda Ohio ayaa ka mid ah jaamacadaha ugu waa weyn ee dalka Maraykanka si weyna loo qadariyo.
Madaxweyne Xasan ayaa ka waramay xaaladda nabadgelyo, siyaasad, dhaqaale iyo waxbarasho ee dalka Soomaaliya wuxuuna kula dardaarmay dhallinyarada Soomaaliyeed ee dhigata Jaamacadda Ohio inaysan hilmaamin dalkooda Hooyo ayna muhiim tahay inay ku soo noqdaan markay waxbarashadooda dhamaystaan isbedel fiicanna ka sameeyaan.
Waxaa uu ku booriyay madaxda Jaamacada Ohio inay dhanka waxbarashada ka caawiyaan dalka Soomaaliya.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa kulamo la qaatay Xildhibaanada Gobolka Ohio, isagoo kala hadlay taageerada Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa habeen hore la kulmay Jaaliyada Soomaalida ee magaalada Columbus ee Gobolka OHIO oo uu uga warbixiyay xaalada dalka, kana codsaday inay dowladda taageeraan, dibna ugu soo laabtaan dalka.